Ukudla Technology phisa ngokuvamile kusekelwe Mash isibilile uyabaselwa kuya okusezingeni eliphezulu ukuvala abacaphuni kanye nokupholisa alandelayo evala utshwala. Ukuze lungiselela vodka ngempela eliphezulu ayinaphunga, kudinga wangenela Ukushisa Mash. Asizwise lokhu kabanzi kule nqubo.
Kancane mayelana nobuchwepheshe
Ngakho, ubhiya yaqala ukwenziwa is batheleka umshini ivolumu kanye Ukudlalwa yokuphisa 2/3 inqubo iqala. Ngo esigabeni sokuqala Ukushisa ukugeza wenziwa ngesivinini. Lapho izinga lokushisa ifinyelela degrees 70, ijubane efiselekayo ukunciphisa. Futhi lapho kuqala isusiwe, ngeke zisaba ukwandisa. Kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi izinga lokushisa kwe-emfantwini kusukela moonshine apharathasi akazange idlule degrees 30. Kungenjalo, izinga umkhiqizo osuphelile kuyoba aphansi. Ukuze uthole phisa futhi ayinaphunga, kubalulekile ukuba banamathele ngokuqinile ubuchwepheshe. Uma kwenzeka uma phisa emfantwini ngokweqile izinga lokushisa eliphakeme, Ukupholisa kumele kuciniswe. Kuyinto ngokwanele ukuba umane ukwandisa umthamo wamanzi abandayo. Ngaphezu lokushisa, kubaluleke kakhulu ukuba lokhozi, kanye nesivinini ngawo vystekaet umkhiqizo osuphelile. Ochwepheshe kulo mkhakha yokuphisa belulekwa ukuba ulungise kuleveli 150 amathonsi ngomzuzu. Kungenzeka futhi zangena kabani ukujiya akumele leqe ukufana. Ukuze hola esiphezulu zonke moonshine eziqukethwe Braga, kubalulekile lizothola ingxenye yesithathu umthamo yokuqala ukugeza. Lapho izinga lokushisa Mash ifinyelela 98 degrees E, inqubo ziphuzo zazihluzwa kumele kumiswe.
Emabhulohweni esidingekile ukuthola umkhiqizo omuhle
Uma lezi ziqondiso, uyoba ukhethe kakhulu fusel amafutha ukufinyelela. Ukuze uthole phisa futhi ayinaphunga, kubalulekile ukuba sifinyelele umkhiqizo kanzulu xaxa. Ukuze le ngxube wafakwa redistilled ku ubuchwepheshe ngenhla. Ngaphambi phisa redistilled buhlanjululwe ngamanzi esithambile. Zonke kahle exubile. Brew ziphuzo zazihluzwa yesibili Kwenziwa kuphela ngemva kokuba esefike 45 degree okuhlushwa. Phela, lo run yesibili ihlanganisa ukuzihlukanisa umkhiqizo zihlukaniswe zibe izingxenyana ezincane. Ngokwesibonelo, ingxenyenamba phisa lokuqala etholwe isinyathelo sokuqala Ukudlalwa. Muhle akukho izinga ezahlukene ezinhle. Anakho nephunga okunoshukela kakhulu futhi ukunambitha ezimbi. Samogon ingxenyenamba yesibili kukhishelwa esitsheni ehlukile futhi esetshenziselwa ukulungiselela izinhlobo zophuzo oludakayo. Kuyiqiniso, kudingeka chemical yokuhlanza. Ngemva ke ungathola ayinaphunga moonshine. Ekugcineni, izinga ubhekwa umkhiqizo isidlulile izigaba ezintathu ziphuzo zazihluzwa. Wathola ehlanzekile kunazo, has a nephunga mnandi kakhulu futhi ukunambitheka eqinile kakhulu. Ngokuvamile, kuba a utshwala okuqukethwe ongaphakeme (10%) kanye equkethwe yenqwaba uwoyela fusel. Isiphuzo kumele kuvikelwe, futhi kungenziwa abeke etafuleni. Yiqiniso, akunakwenzeka ukuba wazi konke mayelana moonshine. Inqubo ukukhiqizwa yayo, naphezu alula sobala, has a ubuqili mass. Kuyadingeka ukuba ukushayela ezingaphezu kweyodwa ilitha lo mkhiqizo ukuze uthole uyavuza isiphuzo, okuyinto ungakwazi aphathe abathandekayo. Oh yebo, futhi khumbula ukuthi ukuphuza ngokweqile kungaholela imiphumela yempilo ezimbi.
Indlela yokwenza ilogo iqembu?